Ahitana sehatra telo : Hiarahan’ny fihaonana sy ny zava-baovao ny fetin’ny Mozika -
AccueilVaovao SamihafaAhitana sehatra telo : Hiarahan’ny fihaonana sy ny zava-baovao ny fetin’ny Mozika
Toa ny isan-taona, dia ankalazaina ny 21 jona ny fetin’ny mozika. Noho io andro io, izay andro fiasana anefa dia naroson’ny Alliance Française Andavamamba (Aft) ny 16 jona izao ny fankalazana ny fetin’ny mozika izay hiarahan’ny fihaonana sy ny zava-baovao. Toa ny mahazatra dia vory amin’io hetsika io ireo mpanakanto avy amin’ny faritra samihafa, mivoy ny gadona samihafa, ary ny endrika mozika samihafa. Hatramin’ny taona 1982, dia firenena 130 maneran-tany no miara-mankalaza izany fetin’ny mozika izany, ary tsy diso anjara amin’izany isika eto Madagasikara.
Ny 16 jona izao, dia asongadin’ity hetsika etsy amin’ny aft ity ny fahasamihafana ara-amozika eto Madagasikara. Sehatra telo lehibe izay hitondra ny anaran’ireo zava-maniry manitra malagasy no handray sy hampiantrano avy amin’ny faritra maro. Veromanitra ny sehatra voalohany izay handray ireo mpanakanto mivoy ny mozika ankehitriny, izay ahitana an-dry Kristel, Moajia, Minah, Kabosy Spirit, Dougle, Rain’Ve, Af Jazz, A’Kalo, Di’Mtambatra, Mafmj ary Nialy To. Havozo kosa no anaran’ny sehatra faharoa izay natokana ho an’ny mozika mafana, ary ahitana ny fandraisan’anjaran-dry Dedake, Jarifa, Sarandra Beloba, Ariane, Mijah, Bokasy, Manangy, Derness, Johratsim, Mpanaliha… Ny sehatra fahatelo kosa dia ny Ravintsara, izay haka endrika trano fandihizana ary miaraka amin’ireo mozikan’ny tanora. Hifandimby hanafana io sehatra io ry ADR, Kimjah, Tseckma, Nayad, Aing’Uh, Inviktus Laboratory ary Lay Jo.